Iwu ahụ: porn vengeance bụ ize ndụ na iwu na-akwadoghị | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Iwu Megwara porn
Ihe ohuru, nke na-agbasawanye ngwa ngwa metụtara mmekọahụ bụ "ịbọ ọbọ porn". Ọ bụ ntanetị n'ịntanetị nke nhicha na topless photos n'enweghị nkwenye n'ime mgbalị ịkụda ma merụọ ihe mgbaru ọsọ, ọtụtụ n'ime ụmụaka. Ọ na-esirikarị ndị mmadụ ike iwepụ foto na ịntanetị. Ọtụtụ ebe ebe a na-akwado ihe oyiyi ahụ na-abụghị UK, a na-elegharakwa arịrịọ maka iwepu ọdịnaya.
N'April 2017, iwu ọhụrụ ahụ na-akwụ ụgwọ na igbu ọchụ na Scotland abanyela n'okpuru Omume Ọjọọ na Mmekọahụ Mmekọahụ 2016. Ọnwụ kachasị maka ikpughe maọbụ egwu iyi igosi foto ma ọ bụ vidiyo bụ 5 afọ mkpọrọ. Mmejọ ahụ na-agụnye ihe oyiyi e mere na nzuzo ebe mmadụ na-eyi uwe ma ọ bụ naanị uwe ma ọ bụ na-egosi onye na-enwe mmekọahụ.
Ngwaputa ugwo bu ndi omekome na England na Wales. Israel bu mba mbu n'uwa iji mee ya iwu na-akwadoghi ma meso ya dika nmekorita nwoke. Ugwo, ọ bụrụ na a mara gị ikpe, ọ ga-eru afọ 5 n'ụlọ mkpọrọ. Brazil kwabatara ụgwọ iji mee ya iwu na-akwadoghị. Na United States, New Jersey na California na-ebute ụzọ n'otu njedebe. Na Kanada, a mara nwa agbọghọ 17 maka inwe ihe nkiri foto ụmụaka mgbe o kesịrị foto nhicha nke enyi nwanyị enyi ya nwoke na enyi ya n'eme ekworo.
Ihe enyemaka iji nyere aka gụnyere Onyinye Akaebe Akwụgwo Akpapụta na Enyemaka Ụmụ nwanyị Scottish.
Nke a bụ onye nduzi zuru oke na iwu ahụ ma ọ bụghị iwu ndụmọdụ.
<< Onye Na-eme Mmekọahụ? Ibili na mpụ >>